ब्यावफ्रेन्डको हातबाट कुटाइखाएका बलिउडका चर्चित ५ नायिका – Medianp
ब्यावफ्रेन्डको हातबाट कुटाइखाएका बलिउडका चर्चित ५ नायिका
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३१, २०७५१४:५७0
एजेन्सी, बलिउडमा घरेलु हिंसाका घटना धेरै सुनिने गर्छन्। विवाहित मात्र नभई अभिवाहित नायिका पनि घरेलु हिंसाका सिकार भएको घटना बलिउडमा बेला -बेला आउने गर्दछ । आज हामी चर्चा गर्दै छौ ब्यावफ्रेन्डको पिटाइ खाएका बलिउडका चर्चित ५ नायिकाको बारेमा
विश्वफुटबलमा मेस्सी र रोनाल्डोको १० बर्षे दबदबा, अब को ?
सडक सञ्जाल विस्तारले स्थानीयवासी खुशी
बलिउडका यी ४ अभिनेत्रीहरु , जसको थियो अभिनेता अजय देवगनसँग गहिरो प्रेमसम्बन्ध ! को को हुन् ?
साउथ स्टार महेश बाबुको नयाँ फिल्म नेपालमा युट्युब ट्रेनडिङको एक नम्बरमा, यहाँ गएर हेर्नुहोस